အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဆွီဒင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Staffan Herrström တို့ တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး – Ministry of Foreign Affairs
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဆွီဒင်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Staffan Herrström တို့ တယ်လီကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(၁-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဆွီဒင်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Staffan Herrström အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် လက်ခံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ သံအမတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီး တာဝန်များ မကြာမီပြီးဆုံး၍ ပြောင်း‌‌ရွှေ့ခြင်းမပြုမီ farewell call အဖြစ် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကာလအတွင်း နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာ၌ တိုးတက်မှုရရှိခဲ့သည့် အခြေအနေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Access to Health Fund မှတစ်ဆင့် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံအနေဖြင့် အပြုသဘော ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားရေးအပါအဝင် မြန်မာ-ဆွီဒင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် ဆွီဒင်သံအမတ်ကြီးက COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနေခြင်းအပေါ် ချီးကျူးစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆွီဒင်နိုင်ငံအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည့် လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်အသိပေး ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။